Daawo:Bank si yaab leh lacag looga dhacay asagoo la isticmalaayo Cagaf cagaf | Baahin Media
Daawo:Bank si yaab leh lacag looga dhacay asagoo la isticmalaayo Cagaf cagaf
Falalka dhaca ah ee loo geysto bangiyada ayaa inta badan loo adeegsadaa hub iyo siyaabo kale oo lagu jabsado sanduuqyada lacagta, hase yeeshee sheekadan way ka duwan tahay sidaas waxaana dhaca bangigan loo adeegsaday hab cajiib ah oo ay dad badan la yaabeen.
Muuqaal ay duubtay Kaamirada CCTV-ga ee lagu ilaaliyo meheradaha ayaa muujisay Cagafcagaf wayn, oo ah nooca dhulka lagu qodo, oo jajabinaysa albaab laga galo goob kaalin shidaal ah oo ku taala magaalada Dungiven ee waqooyiga Ireland.
Koox tuugo ah oo la sheegay inay gaarigaas weyn wateen ayuu qorshahoodu ahaa si ay u dhacaan mashiinka lacagaha bangiga lagala baxo ee loo yaqaanno ATM-ka.
Booliska oo baaritaan ku wada dhacdadan ayaa baahiyay muuqalkan si loo soo helo tuugada gaysatay fallkan.
Falkan sidee loo fuliyay?
Darawalka Cagafta waday ayaa ahaa nin ay ka muuqatay aqoon sare oo la xariirta adeegsiga makiinadda cagafta.
Hase yeeshee, ninkan ayaa markii horeba soo xaday Cagafta uu howlgalka burcadnimada ah ku filinayay,wuxuuna bartilmaamsanayay goobta uu mashiinka bangiga kaga jiray dhismaha.
Waxa uu ka billaabay burburinta saqafka sare ee dhismaha, wax yar kadib, sida muuqaalka laga arkayo, wuxuu si xirfadaysan cagafta gacanteeda ugu qaaday qasnada bangiga oo la arkayay isaga oo dusha kaga riday sidii kubadda kolayga gaadhigii ay ku dhacayeen tuugadaasi bangiga.
Darawalkan ayaa la arkayay isaga oo si dhaqso ah isaga furay albaabka cagafta, wuxuuna islamarkiiba fuulay gaadhigii, kadibna waxay goobta uga dhaqaaqeen socod xawli ah.
Dhacdadan ayaa lagu tilmaamay tii u darnayd ee noceeda ah oo ka dhacda dalka UK , marka laga hadlayo falalka dhaca bangiyada.
Kaamarooyinka loo adeegsado la socodka dhaqdhaqaaqyada ayaa waqtiyadan danbe noqday qalabka ugu mihiimsan ee loo isticmaalo sugidda amaanka, si loo yareeyo tuugada noocyadooda kala duwan, kuwaas oo isku daya falalka dhaca iyo boobka.